दु:खद खबर: मेयर र सुरक्षाकर्मीसहित ८० जना संक्रमित, जिल्लाभर लागु हुनेगरी अनिश्चितकालिन निषेधाज्ञा घोषणा !! – News Np Online
अनिशाको घरमा गो’ली च’ल्यो ! बुबालाई घिसारेर सडकमा लगियो। स्थिति त’नाव ग्रस्त
मुख्य पृष्ठ /News/दु:खद खबर: मेयर र सुरक्षाकर्मीसहित ८० जना संक्रमित, जिल्लाभर लागु हुनेगरी अनिश्चितकालिन निषेधाज्ञा घोषणा !!
दु:खद खबर: मेयर र सुरक्षाकर्मीसहित ८० जना संक्रमित, जिल्लाभर लागु हुनेगरी अनिश्चितकालिन निषेधाज्ञा घोषणा !!
बाराका १७ जना र पर्साका ६३ जना गरी कुल ८० जनामा कोभिड १९ को संक्रमण पुष्टि भएको छ। आइतवार राती नारायणी अस्पताल र काभ्रेको धुलिखेल पीसीआर ल्याबबाट आएको रिपोर्टअनुसार पर्सा र बाराका ८० जनामा संक्रमण देखिएको भएको हो। संक्रमितमा २४ महिला र ५६ पुरुष छन्।
नारायणी अस्पतालको ल्याबबाट एक महिलासहित ११ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ। जसमा निजगढ सशस्त्र क्याम्पका ३५ वर्षीय कर्मचारी, ईप्रका निजगढका ३१ वर्षीय कर्मचारी, कलैया ६ का २७ वर्षीय पुरुष र कलैयाका ३९ वर्षीय पुरुष गरी ४ जना रहेका छन्। त्यसैगरी वीरगंजकी ३८ वर्षीया महिला र पुरुष ६ जना गरी ७ जना रहेका छन्। काभ्रेको धुलिखेल ल्याबबाट वीरगंज महानगरको त्रिजुद्ध क्वारेन्टाइनका ७ जना महिलासहित २८ जना, पोखरीया नगरपालिकाका मेयर दिपनारायण रौनियार, पोखरीया अस्पतालका मेसुसहित डा. अनिल यादव र थप दुई जना अन्य डाक्टर गरी ३३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। **** यो समाचार पुरा हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ******
एक जना स्टाफ नर्स पनि संक्रमित भएकी छन्। पोखरीयाका ४ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष लक्ष्मण साह कानुसहित २५ जना पुरुष छन् भने ८ जना महिला रहेको जनाइएको छ। पोखरीया अस्पतालका अब ७ जना डाक्टरमध्ये ४ डाक्टर र ४ नर्समध्ये ३ नर्स संक्रमित भइसकेका हु्न्। त्यसैगरी, जगरनाथपुर गाउँपालिकाका १६ वर्षदेखि ४४ वर्ष सम्मका १ महिलासहित १५ जना संक्रमित भएका छन्। त्यसैगरी धुलिखेलको रिपोर्ट अनुसार कलैया अस्पताल बाराबाट संकलित नमूनामध्ये ३ महिलासहित १३ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको नारायणी अस्पतालका मेसु मदनकुमार उपाध्यायले जानकारी दिए। पर्सा-कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न हाल जारी रहेको निषेधाज्ञालाई थप कडाईका साथ लागु गर्न पर्सामा सेना परिचालन गरिएको छ।
निषेधाज्ञालाई थप कडाई गर्नको लागि जिल्ला भरी साउन ३२ गते बिहान ५ बजेदेखि सेना परिचालन गरिएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङले जानकारी दिए।
प्रजिअ तामाङका अनुसार ३२ गतेदेखि आउदो भाद्र १३ गतेसम्मको लागि जिल्ला भरि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगार्थ सेना परिचालन गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले १६ वटै स्थानीय तहमा आजबाट अनिश्चितकालका लागी निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । बारामा समूदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । जिल्ला कोभिड समन्वय समितीको बैंठकले निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । औषधी पसललाई २४ सै घण्टा खोल्न अनुमती दिइएको छ । त्यसैगरी खाद्यान्न, ग्यास, इन्धन, दुध डेरी, तरकारी जस्ता अत्यावश्यकीय सामाग्रीका पसल भने बिहान ५ बजे देखि ८ बजे सम्ममात्र खोल्न पाइने भएको छ । अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरिएको छ ।
दु’खद ख’बर : ५६ यात्रु बो’केको ब’स दु’र्घटना, १९ जनाको मृ’त्यु